China 300kg / h izikhwama eziphothiwe zokukhama abakhiqizi bemishini nabaphakeli | Imishini Yokuceba
Umshini wePelletizing Pelletizing
Umshini Wokucindezela Ifilimu wePlastiki
Shared Single / kabili Shaft
Umugqa Wokuwasha Ngeplastiki
Umugqa wePlastiki / Amaphrofayli Extruder Line
300kg / h izikhwama ezilukiwe zokukhama umshini
Lo umshini wepulasitiki wohlobo olusha, okhethekile wokusebenzisa kabusha ipulasitiki kanye nolayini wokuwasha, ungathatha indawo yomshini wamanzi, umshini wokomisa, ngemuva kwefilimu kusuka ekuwashweni okuphezulu kokushayisana. Lapho wenza ama-granules, futhi ayidingi i-compactor. Izokonga izindleko zomshini namandla namandla futhi kulula ukulawula.
Lo mshini usebenzisa umthetho wokukhama ukomisa amanzi emzimbeni, okuwukuhlanza ifilimu lepulasitiki (ifilimu yepulasitiki, ifilimu yesikhumba semifino yezolimo, isikhwama eselukiwe se-PP, isikhwama sesikhumba senyoka, isikhwama sesikhala, isikhwama sethoni, ipulasitiki elincanyana lephepha lepulasitiki) ngokushesha Idivayisi yokukhama amanzi aseplastikini. Ziphethe rotary isikulufa sedivayisi, isinciphisi esikhethekile, imishini ezenzakalelayo ngokuphelele yokukhama nefilidi leplastikhi, ipulasitiki yefilikhi yesifudumezi, isikhwama eselukiwe se-PP, isikhwama sesikhumba senyoka, isikhwama sesikhala, isikhwama sethoni, ipulasitiki elincane lepulasitiki kadoti, njll. Lo mshini usebenzisa umthetho wokukhama uketshezi futhi ufakelwe umshini wokujikeleza isikulufa ukukhama nokucekela phansi ifilimu lepulasitiki. Ukusebenza kokukhama nokoma emzimbeni kuyashesha futhi umphumela muhle. Lo mshini kulula ukuwusebenza, umphumela wokukhama nokoma ungafinyelela ngaphezu kwama-95%, futhi umphumela ungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Imibono ejwayelekile yokuklama efana nale engezansi:
1.ukucindezela umgqomo womshini akudingeki ukwelashwa nge-38Crmoal, ngoba ingxenye ye-fricton isekhanda.
Kepha ngidinga ukwelashwa okushisayo. (Ukushisa okuyingxenye ngama-38Crmoal)
2.squeezing machine barrel design, ngaphezulu, umgqomo uzobhola izimbobo ezincane kakhulu. Imbobo yangaphakathi cishe ngo-3mm, ngaphandle cishe ngo-6mm.
Ngakho-ke lo mklamo ungaqinisekisa ukuthi awubambeki ezintweni lapho unengcindezi ephezulu ngaphakathi.
I-3.inside yomshini wokucindezela umshini unama-5 ama-Keyway, (isithombe singu-300 uhlobo, yiba nama-6 pcs Keyway),
lo msebenzi we-Keyway uqinisekisa ukwenza i-rawmaterial Push phambili nge-screw.
Umshini wokukhama we-Screw material kumele ube yi-38Crmoal, rigidy high, ukumelana okuhle kwe-nemihuzuko.
Umshini wokucindezela umshini we-5.squeezing by TWO-IN-ONE, usebenzisa izindleko eziphansi kakhulu.
Izimbobo 6.the isikhunta umshini ocindezela kungaba adjustable 3
7. Umgomo oyingqayizivele wokukhipha amanzi emzimbeni uxazulula inkinga enzima yokwehla kwepulasitiki kwendabuko okufana nefilimu;
8. Umphumela omuhle wokucindezela: kuqinisekiswe ngaphezu kuka-95%;
9. Ubuchwepheshe baseTaiwan, obenziwe eChina, bonga kakhulu;
10. Ukuphela kwamanzi emzimbeni, uma kuqhathaniswa nokomiswa komoya oshisayo kwasekuqaleni, konga kakhulu amandla;
uma imininingwane ethokozisayo, xhumana no info@zjgrcmc.com
Langaphambilini okufana newele isikulufa extruder
Olandelayo: I-PP Melt Blown
Umshini wokukhipha ifilimu we-PE / PP
umshini wokucindezela ifilimu
Umshini wesikhwama sobisi lwe-PE
Awukho umshini ocindezela umshini wokusika
umshini wokukhipha umshini wempahla eyiphepha
INGABE UTORUI WAKHO